कोरोना संक्रमणबाट भक्तपुरका ४० वर्षीय पुरुषको मृत्यु : RajdhaniDaily.com
Home Breaking News कोरोना संक्रमणबाट भक्तपुरका ४० वर्षीय पुरुषको मृत्यु
कोरोना संक्रमणबाट भक्तपुरका ४० वर्षीय पुरुषको मृत्यु
काठमाडौं । पाटन अस्पतालमा उपचाररत भक्तपुरका ४० वर्षीया कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ ।
भक्तपुर मध्यपुर थिमि नगरपालिका ७ का कोरोना संक्रमति पुरुषको गएराति (मंगलबार) मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले भदौ ५ गते उपचाररत ४० वर्षीया कोरोना संक्रमित पुरुषको गएराति मृत्यु भएको पुष्टि गरे । उनको आमाको चार दिन अघि कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भएको थियो ।
काठमाडौं । मनसुन शुरु भएसँगै देशभर बढेको वर्षाका कारण जनधनको क्षति हुने क्रम पनि शुरु भएको छ । वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी,...
काठमाडाैं । सेयर बजारमा ‘कर्नरिङ’ हुने गरेको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुष्टि गरेको छ । बोर्डले गरेको अध्ययनले ५१ वटा कम्पनीको सेयरमा कर्नरिङ...
दुर्घटनामा दुई युवाको ज्यान गयो
सप्तरी, राजविराज । पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको महुली खण्डमा आईतबार राती मोटरसाईकल र म्याजिक भ्यान ठोकिएर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको ज्यान गएको छ...
‘खोई कहाँ छ सरकार !’
दैलेख । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउन पछि आठविस नगरपालिका–१ सुकिपिउलीमा बस्दै दिपा दमाईको एक हप्तादेखी चुल्हो...
बिचार डा.देवीप्रसाद आचार्य - April 15, 2021 0
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध पर्वतारोही आङरिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरोही शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ...
निर्भया बलात्कार काण्डका चारै दोषीलाई शुक्रबार बिहानै मृत्युदण्ड दिइयो
Breaking News Roshan Shrestha - March 20, 2020 0
काठमाडौं । भारतको चर्चित बलात्कार काण्ड निर्भया बलात्कारका चारै जना दोषीलाई आज बिहान मृत्युदण्ड दिइएको छ । दिल्लीको तिहाड जेलमा बिहान साढे ५ बजे...
Not-to-be-missed Prem Shyangtan - March 18, 2020 0
रौतहट । हिजोआज रौतहट प्रहरीले अबैध रुपमा उत्पादन हुदै आएका घरेलु मदिरा उत्पादन केन्द्र रक्सी भट्टी नष्ट गर्ने अभियानलाइ तिब्रता दिएको छ । केही...
जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा चारको मृत्यु
जाजरकोट । जन्ती बोकेको जीप कच्ची सडकमा दुर्घटना हुँदा रुकुम पश्चिम आठबीसकोट नगरपालिका–७ पोखरामा चारको मृत्यु भएको छ । आठबीसकोट–२ घारीखोलाबाट जन्ती लिएर आठबीसकोट–८ दाँजेतर्फ...
संघीय निजामती सेवा ऐन सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र
प्रदेश ५ Sushila Bishwokarma - July 31, 2020 0
बुुटवल । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्य समिति, रुपन्देहीले संघीय निजामती सेवा ऐन सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुुझाएको छ । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक...
Breaking News Sushila Bishwokarma - May 25, 2020 0
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । उनले आज साँझ ५ः३० बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन...
सुभाष साह - June 12, 2021